Amathiphu Wokwenza Isimo Sezulu Namasu - Isikhungo se-EcoTechnology
Izeluleko Namasu Okusetshenziswa Kwesimo Sezulu
Njengoba isimo sezulu siba sibanda, ungahle uqale ukucabanga ngokuthi ungayigcina kanjani indlu yakho ifudumele. Isimo sezulu yinkqubo lapho uvikela khona indlu yakho ezintweni ezingaphandle, kufaka phakathi iqhwa, imvula, nesimo sezulu esibandayo! Isimo sezulu sizokwehlisa ukusetshenziswa kwamandla endlu yakho futhi sikongele amandla nemali. Futhi, kulula kakhulu ukukwenza!
Kungani kubalulekile ukukwenza?
Isizathu esisodwa esenza ukuthi isimo sezulu sibe ngcono ukuthi ukhululeke ekhaya lakho. Ngeke nje kuphela ukuthi isimo sezulu sinikeze induduzo engcono kanye nokusalungiswa okumbalwa, kepha kuzokongela nemali ezindlekweni zamandla ngenkathi kwenza ikhaya lakho longe amandla futhi lilondoloze imvelo. Abanini bamakhaya abaningi babhekene nezikweletu eziphakeme zamandla unyaka wonke futhi abaqapheli ukuthi amasu afanele wokwenza isimo sezulu angaxazulula unomphela inkinga. Isimo sezulu sibuye sithuthukise ikhwalithi yomoya, sandise ukulawulwa komswakama, futhi sivimbele izinto ezinjengamadamu eqhwa, amapayipi aqandayo, nokukhula kwesikhunta kusuka ekucineni (njengoba ulawula umswakama ngaphezulu).
Zinjani izindleko zokonga?
Ngokuthuthuka kwesimo sezulu kanye nokwenza ngcono, amakhaya angonga imali elinganiselwa ku- $ 283 noma ngaphezulu unyaka ngamunye ngokusho kwe- ukuhlolwa kukazwelonke wohlelo. Ngokusho kwe- UMnyango Wezamandla, ungonga futhi okungu-10% ngonyaka ekushiseni nasekupholiseni ngokumane ubuyisele i-thermostat yakho emuva 7 ° -10 ° F amahora angu-8 ngosuku ukusuka esimweni sayo esijwayelekile.
Ngakho-ke, yini engingayenza njengomninikhaya / umqashi?
Into engcono kakhulu ongayenza ukuhlela ukuhlolwa kwamandla ekhaya, lapho uchwepheshe wamandla ezokutshela ukuthi ikhaya lakho lingasebenza kanjani ngamandla amaningi! Iya ku umaskandi.com ukuze ufunde kabanzi.
Kepha, kunezindlela eziningi ze-DIY ongazijwayeza ikhaya lakho ngezinto ongazithenga kunoma yisiphi isitolo sehadiwe.
Iyiphi into? Ngiyisebenzisa kanjani? Ngingayisebenzisa kuphi?
Ikhokho Thenga ishubhu lokukhwabanisa kunoma isiphi isitolo sehadiwe, bese usinamathisela kusibhamu esikhwezayo. Kancane kancane nangokuqhubekayo bamba inhlamvu yokwakha ubuhlalu obude. Bese uyishelelisa bese uyayoma. Emaphethelweni emafasiteleni / eminyango (kufaka phakathi egumbini lakho elingaphansi!), Eduze kwama-heaters wakho we-baseboard, noma yikuphi ukuvulwa odongeni lwendlu yakho njengezitolo, ama-dryer vents, kanye namapayipi kagesi namanzi. Noma yini ongayibamba nxazonke!
I-foam sealant Qiniseka ukuthi ugqoka amagilavu ​​nezambatho zamehlo zokuzivikela. Cindezela phansi kancane, iyaqhubeka nokudedela nangemva kokuyeka i-trigger. Noma iziphi izikhala ezinkulu (ezinkulu kune-1-intshi), njengamapayipi azungeze egumbini lakho elingaphansi / elisophahleni, noma imifantu.
Intambo yesimo sezulu kanye nentambo yokubamba Kungathengwa kunoma yisiphi isitolo sasekhaya. Thatha intambo uyicindezele endaweni yayo. Isuswa kalula, asikho isibhamu sokubamba esidingekayo, kepha esingaphinde sisebenze! Around windows (uma iwindi lakho livaliwe ngokuqinile) noma iminyango. Ingasetshenziswa futhi njengesidambisi somsindo!
Isimo sezulu sezulu se-V-seal / foam Sika i-V-strip noma igwebu kubude obufunayo, bese ubeka phansi, i-V ibheke ngaphakathi ukudala uphawu. Ngaphakathi kweminyango noma amawindi ukwakha uphawu.
Iwindows insulation shrink kit Yelula ipulasitiki efasiteleni, bese usebenzisa okomisa izinwele ukuyinciphisa phezu kwewindi. Ayisebenzi kabusha! Emaceleni ozimele bakho bewindi.
Buka isigaba sethu sokudlulisa icala iMisa ukuze ufunde kabanzi!
By UNatasha Nurjadin|2020-09-25T16:08:46-04:00Novemba 30th, i-2018|Amandla okusindisa, Ukusimama|